हाम्रो बारेमा - Rmapack.com
ZhongLi प्याकेजिङ्ग मशीनरी कं, लिमिटेड एक राम्रो मान्यता प्राप्त छिटो बढ्दैछ, र खाद्य र पेय पदार्थ, औषधि, डेयरी, प्रसाधन सामाग्री र कृषि आदि जस्तै उद्योगहरूका लागि प्याकेजिङ्ग मशीनरी निर्माणमा संलग्न आईएसओ 9001 प्रमाणित चीनी कम्पनी हो।
हामीले संसारका विभिन्न भागमा सयौं कम्प्यूटरहरू प्रदान गरेका छौं। हामी तपाईंको विश्वसनीय प्यालिङ समाधान साझेदार हो जुन सबै प्रविधिहरु को लागि मुफ्त प्रवाह तरल, टास्ट, पाउडर, ग्रंथ, नाश्ता, खाद्य उत्पादन, रसायन, औषधि उत्पादन आदि।
हाम्रो उत्पादन दायरा:
○ नि: शुल्क प्रवाह तरल, टाँस्नुहोस्, पाउडर, ग्रेन्युल्स, स्नैक्स, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आदि को लागि पाउच प्याकेजिङ्ग मिसिनहरु, ऊर्ध्वाधर प्रकार को रूप भरने को भरने - भरने मिसिन, पूर्व निर्मित पाउच पैकिंग मिसिन, ठूलो आकार को बैग पैकिंग मिसिन, वैक्यूम पैकिंग मिसिन, बुना बैग पैकिंग मिसिन, Teabag पैकिंग मिसिन आदि।
○ निरीक्षण गर्ने यन्त्र जो प्याकिङ्ग मशीनहरू जस्तै चेक हाइटर, मेटल डिटेक्टर, रङ सेटर प्रयोग गर्दछ
○ ट्राफिक कन्वेयर, केस एसलर, लिपिङ मेसिन जस्तै अन्त्यको लाइन प्याकेजिङ्ग मिसिनहरू।
कृपया तपाईंको प्याच प्याकेजिङ समाधानको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न संकोच नगर्नुहोस्!
हामी विश्वास गर्दछौं कि गुणवत्ता ग्राहक संतुष्टि प्राप्त गर्न मा महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। यसैले, हाम्रो गुणस्तर नीतिको समग्र उद्देश्य हाम्रो उत्पादन र सेवाहरूको निरन्तर सुधार मार्फत ग्राहक सन्तुष्टिलाई गुणा बढ्दै गएको छ। हामी उचित मूल्य मा अन्तर्राष्ट्रिय मानक गुणवत्ता को मिसिनहरु लाई आपूर्ति को लागि 100% प्रतिबद्धता मा विश्वास गर्छन, हामी हाम्रो ग्राहक सेवा, शीघ्र सेवा र समर्थन को लागि जान्दछौं। हामी सधैँ गुणस्तर, सेवा, उत्पादकता र समयको अर्थव्यवस्थामा निरन्तर सुधार मार्फत ग्राहक अपेक्षाहरू भन्दा बढी प्रयास गर्ने प्रयास गर्दछौं
चीनमा मूल, संसारको सेवा!
हामी प्याकिंग मिसिनहरु को चीनी मध्य र उच्च अन्त बजार को नेता बनने को प्रयास गर्छन!